Ike na adịghị ike na usoro ịzụ ahịa ịntanetị | ECommerce ozi ọma
Ike na adịghị ike na usoro ịzụ ahịa n'ịntanetị
Inwe ihe ịga nke ọma na a atụmatụ ịre ahịa n'ịntanetị ọ dị mkpa iburu n'uche otú ike na adịghị ike nke azụmahịa gị ha ga-emetụta ahịa gị kpọmkwem.
Maka nke a, ọ dị mkpa ka ị mepụta a nyocha na eziokwu, na-achọ maka ike na adịghị ike, yana egwu na ohere.
1 Kedu ihe bụ ike na adịghị ike
1.1 Kedu ihe bụ ike
1.2 Gịnị bụ adịghị ike
2 SWOT ọmụmụ: gịnị kpatara ọ ji dị mkpa
3 Etu esi eme SWOT ọmụmụ ihe na ntanetị ahịa
3.1 Mara ihe dị n’ime gị
3.2 Mara ihe mpụga gị
3.3 Zụlite usoro ịzụ ahịa ịntanetị gị na-eme ka uru nke eCommerce gị dịkwuo elu
4 Kedu ihe bụ ike na adịghị ike nke azụmahịa Ecommerce gị?
5 Strategy Marketing Online: Gini banyere Ohere na Egwu?
Kedu ihe bụ ike na adịghị ike
Nke mbụ, ị kwesịrị ịma nke ọma ihe anyị bu n’obi ike na adịghị ike na eCommerce. Usoro ndị a nwere njikọ chiri anya na SWOT Study ma n'otu oge ahụ ha na-enye gị ọhụụ ụwa banyere ọnọdụ nke azụmaahịa gị n'ịntanetị. N'ezie, nyocha nke ike na adịghị ike nke azụmahịa (ma ọ bụ n'ịntanetị ma ọ bụ nke anụ ahụ) nwere ike inyere gị aka ịkwalite akụkụ ndị ahụ ị "mehiere" ma bulie ndị na - eme ka ị dị iche na asọmpi gị.
Ya mere, ịmata nke ọ bụla n’ime ha ga-enyere gị aka ikpebi akụkụ dị iche iche nke eCommerce gị.
Kedu ihe bụ ike
Anyị nwere ike ịkọwapụta ike dịka ikike ndị mmadụ nwere, ma ọ bụ azụmahịa, nke na-eme ka ọ pụta ìhè. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ha na-anọchi anya ọdịiche dị mma site na ndị ọzọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ. N'okwu a, anyị nwere ike ịsị na ha bụ njirimara dị mma, ịchọpụta na ọdịiche dị iche iche nke azụmaahịa.
Dị ka ihe atụ, were ya na i guzobere ebe a na-egwuri egwu n’ toyntanet. Ọ na-abịara gị itinye otu akụkụ nke ngosipụta ihe oyiyi ma ha nwere ike itinye ihe egwuregwu ahụ ha chọrọ. Na mgbakwunye, ị na-enye ohere iji 3D ka ọnụ ụlọ ahụ gosipụta n'ụlọ ma soro ndị na-egwuri egwu na-emekọrịta ihe. Nke ahụ bụ ike nke azụmahịa gị, n'ihi na ị na-ewepụta ihe ọ na-enweghị onye nwere, yabụ na ọ bụ ihe dị mkpa iji gosipụta na usoro azụmaahịa.
Gịnị bụ adịghị ike
Ka anyị kwuo banyere adịghị ike. N'adịghị ka ndị gara aga, adịghị ike ndị ahụ njirimara ndị na-egbochi ma ọ bụ na-egbochi mmepe kwesịrị ekwesị nke usoro azụmaahịa gị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị na-ekwu maka ihe ndị ahụ ga-emerụ gị ahụ yana ịkwesịrị iburu n'uche iji melite eCommerce gị.
Iji nye gị ihe atụ, jiri otu ụlọ ahịa egwuri egwu, adịghị ike ga-abụ ịka nká. O doro anya na e nwere ọtụtụ ndị asọmpi nọ na mpaghara ahụ ogologo oge, nke ahụ pụtakwara na ha nwere ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe ma ọ bụ obere pọtụfoliyo nke ndị ahịa. N'aka nke ọzọ, ọ bụghị gị. Ya mere, anyị na-ekwu maka adịghị ike, ihe ị ga - emerịrị yana n'otu oge ọghọm nke ị jiri tụnyere asọmpi gị.
SWOT ọmụmụ: gịnị kpatara ọ ji dị mkpa
Inyocha ike na adịghị ike nke eCommerce gụnyere ime nyocha nke azụmahịa gị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ ga-abụ ịkwadebe akụkụ mbụ nke nyocha SWOT. Mana gịnị bụ nyocha SWOT?
na SWOT acronyms na-ezo aka n'adịghị ike, iyi egwu, ike na ohere. Ọ bụ nyocha nke emere site na akụkụ dị n'ime (Adịghị Ike na Ike) na mpụga (Ohere na Iyi Egwu).
Akwụkwọ a dị ezigbo mkpa iji nwee ike nyochaa ihe dị ugbu a nke eCommerce gị ma si otú a nwee ike ịme mkpebi kwesịrị ekwesị ma na-agbanwe agbanwe na azụmahịa gị. Kedu ihe ọ ga - eme na usoro ahịa ịntanetị? Ọtụtụ n'ime.
Kpọmkwem, na usoro ịzụ ahịa n'ịntanetị, Ọ bụghị naanị na ọ dị mkpa ịmara ihe ndị ahụ na - eme ka ị pụọ iche na ndị asọmpi, mana ị ga - amata ha. Ọ bụ ya mere ịchọpụta ihe ọma na ihe ọjọọ nke azụmahịa gị ji dị oke mkpa, n'ihi na otu a ị ga - esi kwalite atụmatụ dabere na ike ya ka ị na - arụ ọrụ iji mee ka adịghị ike ndị ahụ bụrụ ike (ma ọ bụ, ọ dịkarịa ala, iji mee ka ha pụọ ​​ma ghara ịbụ akụkụ na-adịghị mma maka eCommerce gị).
Kedu ka m si nwetaviji mepụta SWOT ọmụmụ na usoro ịzụ ahịa n'ịntanetị
Ugbu a ị matara mkpa ọ dị ịmara Ike na adịghị ike, yana Egwu na Ohere, ajụjụ ị ga - ajụ onwe gị gbasara ịme ya. Nke ahụ bụ, olee otu ị ga - esi mee SWOT nyocha na usoro ahia ịntanetị maka eCommerce?
Nyocha SWOT fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na a na-anọchi anya na matrik 2 table 2, ma ọ bụ na tebụl 2,2, n'ụzọ dị otú a na-achịkọta nyocha nke ime na mpụga, na echiche anọ ahụ metụtara n'ụzọ dị otú ahụ na matrik ahụ ga-abụ Ya mere:
Adịghị ike ya - Egwu
Ike - Ohere
N'ụzọ nke a, ndị Kọlụm mbụ ga-adaba na nyocha dị n'ime, ebe nke abụọ ga-emetụta akụkụ nke nyocha mpụga.
Oleekwa otú e si eme ya? Followinggbaso usoro ndị a:
Mara ihe dị n’ime gị
Anyị na-ekwu maka ndị ahụ ihe ndị nwere ike ịbụ ma ike ma adịghị ike. Dịka ọmụmaatụ:
Isi obodo mmadụ.
Mmekọrịta ya na ndị ahịa.
Nka na ihe omuma.
Ọ dị mma ka ị mee ndepụta zuru ezu nke ihe niile metụtara n'ime. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ekewa ya na ngalaba abụọ, ike na adịghị ike. Kedu ka esi amata ọdịiche dị na ha? N'ime ike ị ga-etinyerịrị ihe ndị ahụ na - eweta uru karịa ndị asọmpi gị.
Ọmụmaatụ: akara amaara amara, ntanetị kacha mma, ngwaahịa mara mma, ọnụahịa ka mma ...
N'aka nke ọzọ, ị ga-enwe adịghị ike. Ndị a bụ ndị ga - eme ka ị belata asọmpi, dị ka: enweghị ahụmịhe, nsogbu dị n'ime, akụrụngwa ochie, enweghị ọnọdụ na eCommerce, enweghị ụlọ ọrụ mmekọrịta ...
Mara ihe mpụga gị
Dị ka ihe ndị dị n'ime, ọ dịkwa mkpa ime na mpụga, mana mgbe niile dabere na eziokwu ahụ bụ na asọmpi ahụ dị n'ịntanetị, ebe anyị na-ekwu maka eCommerce.
N'okwu a, ihe ndị dịka ndị na-ebunye gị, ndị na-ekesa ya, ihe gbasara akụ na ụba, mgbanwe na omume ndị ahịa, ndị toro eto older nwere ike ikpebi ohere na egwu gị.
Zụlite usoro ịzụ ahịa ịntanetị gị na-eme ka uru nke eCommerce gị dịkwuo elu
Ugbu a na ị maara ihe niile nwere ike imetụta ọganihu nke eCommerce gị, ọ bụ oge iji zụlite usoro ịre ahịa n'ịntanetị nke na-elekwasị anya n'inweta uru site na Ike na Ohere gị, n'otu oge na ị gbanwere adịghị ike n'ime ihe dị mma, ma kwụsị Iyi egwu
Iji maa atụ, chee na adịghị ike anaghị enwe netwọkụ mmekọrịta. Usoro ịre ahịa n'ịntanetị ga-abụ ịmepụta netwọkụ ndị a wee nye ha akara "agwa", ya bụ, nye ha ndụ ma jigide ndị ọrụ nwere ike ịmasị ngwaahịa ma ọ bụ azụmaahịa gị.
Ọzọ, na n'ụzọ dị irè, ị ga-enwe ike ịmata ihe bụ ike, adịghị ike, ohere na egwu nke azụmaahịa eCommerce. Yabụ, ị ga - enwe ike ihu nsonaazụ ị ga - enweta site na nyocha SWOT.
Kedu ihe bụ ike na adịghị ike nke azụmahịa Ecommerce gị?
Abịa na a atụmatụ ịre ahịa n'ịntanetịỌ bụ ezi echiche ịme ahịa ahịa na ndị ahịa gị ugbu a. Nke a ga - enyere gị aka ịme echiche ziri ezi maka aha gị dị ka ụlọ ọrụ n'ahịa.
Fọdụ ihe atụ nke ike nwere ike ịgụnye:
Ọrụ ndị ahịa nke onwe na nke mgbanwe
Otutu ihe puru iche ma obu uru ndi ahia gi na enye
Enweela ihe ọmụma ma ọ bụ ọkachamara
Banyere adịghị ike:
Enweghị ego dị mkpa
Enweghị aha ọma n'ahịa
Nwee usoro nyocha
Strategy Marketing Online: Gini banyere Ohere na Egwu?
Na nke a atụmatụ ịre ahịa n'ịntanetị maka azụmaahịa Ecommerce Ọ dịkwa mkpa ịgụnye ohere na egwu. N'echiche a, anyị nwere:
Mee ka ọchịchọ nke otu ahịa ahịa dịkwuo elu
Jiri tontanetị gaa ahịa ọhụrụ
Ojiji nke teknụzụ nke na-eme ka ngwaahịa dị mma
Ntoputa nke ndi ndorondoro ohuru
Mma, mara mma ma ọ bụ ọkaibe, ọbụlagodi ụdị nke ngwaahịa a na-enye
Iwu ọhụrụ ndị na-abawanye mmefu
Nkwụsịlata na akụ na ụba nke na-ebelata mkpa ụwa
N'ọnọdụ ọ bụla, ozugbo ịmechara nyocha a, ịnwere ike ịlele mmetụta ọ bụla nwere ike ịhazi usoro ịre ahịa n'ịntanetị. N'ịtụle akụkụ ndị a niile, o yikarịrị ka ọ ga-emepụta usoro ịzụ ahịa n'ịntanetị n'ikwekọ na ihe ndị a chọrọ ugbu a na ohere ka ukwuu nke ịga nke ọma.
Gini mere o ji di mkpa ka ahia ahia dijital?
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahia » Ike na adịghị ike na usoro ịzụ ahịa n'ịntanetị
Enwere ike ịtọlite ​​ecommerce na 24 awa? Dị mkpa iji mezuo ya
Kedu ihe na-eduga n'ịzụ ahịa na otu esi ewepụta ha